Zvikonzero Nei Iwe Usingafanire Kugamuchira Yako Yega Vhidhiyo | Martech Zone
Zvikonzero Nei Iwe Usingafanire Kugamuchira Yako Yega Vhidhiyo
Chipiri, August 12, 2014 Chipiri, May 3, 2016 Douglas Karr
Mutengi ari kuita basa risinganzwisisike parutivi rwekuburitsa uye achiona mhedzisiro yakasarudzika akabvunza kuti maonero angu aivei pamusoro pavo kubata mavhidhiyo avo mukati. Vakafunga kuti vanogona kudzora zvirinani kunaka kwemavhidhiyo uye nekuvandudza yavo yekutsvaga optimization.
Mhinduro pfupi yaive kwete. Haisi nekuti ini handitende kuti vangave vanakisisa pairi, imhaka yekuti vari kurerutsa zvese zvinonetsa zvemavhidhiyo akagamuchirwa akatogadziriswa kumwe kunhu. Youtube, Vimeo, Wistia, Brightcove, uye dzakasiyana siyana Digital Asset Management makambani akatoshanda kuburikidza akati wandei ezvinetso zvemavhidhiyo akagamuchirwa:
Bandwidth Spikes - inopfuura chero saiti yemamiriro, bandwidth spikes inyaya hombe ine vhidhiyo. Kana imwe yemavhidhiyo ako ikaitika yehutachiona… harisi dambudziko rakareruka uye ungangoda ka100 kana kunyangwe ka1000 nguva bandwidth yekuenderana nezvinodiwa. Iwe unogona here kufungidzira pakupedzisira kutora vhidhiyo yako kunze uko uye ipapo mutambi wese ari kusvetuka nekumira apo ivo vari kuyedza (nekusiya kutamba)?
Kuonekwa kweMidziyo - gore vhidhiyo rekubata mapuratifomu anozoona yako yekubatanidza uye yekuona nzvimbo kuti uwedzere kunaka kweiyo vhidhiyo kune vako vanoona. Izvo zvinopa yakanakisa mushandisi ruzivo kune vashandisi vari pane inokurumidza kwazvo kubatana kana kunonoka kubatana zvakafanana. Izvo hazvingovimbise chete kuti vhidhiyo inoyerera nekukurumidza sezvazvinogona, zvakare inoderedza yako bandwidth kushandiswa.
Zvimiro zveMutambi - kugona kuwedzera hotspots, mafomu, kufona-ku-zviito, matiki, intros, outros ... runyorwa rwezvinhu zviri kuverengerwa mumitambo yevatambi iri kukwira nekuti mapuratifomu evhidhiyo akaunganidzwa ane zvikwata zvese zvevagadziri vanoshanda kusimudzira mabhenefiti eaya mapuratifomu. mazuva ese. Makambani anowanzo tarisa kutora vhidhiyo seprojekti kwavanoiongorora kubva pachinyorwa voenderera mberi… asi hunyanzvi uhu hunoda kuenderera mberi nekugadzirisa sezvo zvishandiso zvichichinja, kupinda kune bandwidth shanduko, uye mukurumbira wezvinhu zvinoshanduka. Makambani anogara ari kumashure kana ivo vachiedza kuvandudza izvi mumba.
Muchinjikwa-Saiti Ongororo - ndiani akaisa mutambi wako? Iri kutariswa kupi? Iine maonero mangani? Vhidhiyo dzako dziri kutariswa kwenguva yakareba sei? Vhidhiyo analytics inopa nzwisiso inoshamisa yekuti vashandisi vari kushandisa sei mavhidhiyo, kunyangwe kana ivo vari kutora matanho zvichienderana navo. Sezvo nezvose zvirimo, analytics yakakosha kugadzirisa yako yemukati zano uye nekukwiridzira iyo kune vateereri vako.
Tsvaga Engine Optimization - Zvakawanda zvakanyorwa nezvazvo optimization yevhidhiyo zvatove… asi kiyi yezviwanikwa zvedu ndeyekuti injini dzekutsvaga hadzitarisiri, kukurudzira, kana kupa rubatsiro kumakambani anotambira vhidhiyo yavo. Nepo kufarirwa kwevhidhiyo kuchizobatsira kugona kwayo kurongeka, vhidhiyo yakamisikidzwa pane peji ine zvinyorwa zvinotsigira nemifananidzo zvinomira zvakaringana, kana zvisiri nani, pane peji rekupinda revhidhiyo. Nyaya iripo ndeye Youtube. Tine mapeji pane ino saiti ine yakamisikidzwa yeYouTube mavhidhiyo ayo anorema kupfuura peji reYouTube nekuti akagadziridzwa pamwe nekutsigira zvemukati.
Maitiro Ekubata Vhidhiyo Kubata
Tarisa vhidhiyo ipfupi kubva kuWistia kuti vhidhiyo yekushandira inoshanda sei pane yedu posvo.
Vhidhiyo yekutamba mapuratifomu ane akati wandei ezvimwe zvinhu, zvinosanganisira scalable kuchengetedza, kusangana pamwe neprojeki manejimendi mapuratifomu, kushambadzira kune mamwe mavhidhiyo mapuratifomu, kuburitsa vhidhiyo maficha ekunyorera uye kusanganisira mune yechitatu bato maturusi (senge nharembozha), otomatiki transcoding, email tsamba, inotsvaga maraibhurari, kumaka mavhidhiyo uye kuisa muzvikamu, vhidhiyo dhizaini, uye kugona kusundira zviziviso zvekuburitsa kunetiweki dzako dzevanhu. Izvi zvese zvinhu zvingangoda kuvandudzwa kana iwe uchida kugashira munharaunda - ibasa rakawanda.
NeYouTube iri yechipiri pakutsvaga injini, kunyangwe ndikashandisa sevhisi ine mutambi ari nani uye mhando, ini ndaizoramba ndichigamuchira uye gonesa vhidhiyo yangu paYouTube, wedzera kudhindwa kwevhidhiyo kuti bump zvirimo pane rako vhidhiyo peji uye uve nechokwadi kuti zviri kuwanikwa!
Muchidimbu, ini handikurudzire vanhu kuti gadzira mavhidhiyo avo. Ndine chokwadi chekuti kusarira kwemapurojekiti akatarisana nemakambani mazhinji kana zvasvika pakusimudzira uye tekinoroji ndeyakareba. Tarisa pane yako bailiwick. Kutora nguva yekudzokorora izvo vamwe vanoshanda zuva rega rega hazviite zvine musoro. Nepo mitengo yakadzikira uye matekinoroji akavandudzika kuti agadzire BYO (kuvaka yako), pachine hwaro hwekutanga mumafekitori mazhinji. Isu tinopa mazano kumakambani kuti avake matekinoroji mukati kana zvichinge zvine musoro - kusanganisa nevatatu vevatapi uko zvine musoro.
Vhidhiyo iri kuputika mukuzivikanwa izvozvi… kubatirira pane SaaS gore rinopa iro rakazvipira kusimudzira ruzivo nezvakawanda zviwanikwa ndiyo nzira kwayo yekuenda… nhasi.
Tags: chivavavhidhiyo bhizinesiyakagadzirirwa vhidhiyokubata vhidhiyovhidhiyo analyticsvhidhiyo inodhuramavhidhiyo mafichavideo hostingvhidhiyo mutambi mafichavideo seoVimeoWisdomtiaYouTube
Nyika yeSocial Media Kuongorora uye Ongororo
Aug 17, 2014 pa 8: 44 AM
Chinyorwa chikuru, ndinofarira maitirwo azvo!